I-Apple icela uchungechunge olusha kumqondisi weLa La Land uDamien Chazelle | Ngivela kwa-mac
I-Apple icela uchungechunge olusha kumqondisi weLa La Land uDamien Chazelle
Ekufuneni ukukhula kulo nyaka we-2018 kokuqukethwe okuyikhwalithi, I-Apple ayiyeki enhlosweni yayo yokwenza ama-movie nochungechunge olwehlukanisa nomncintiswano, futhi ngikuvumela ukuthi uthole indawo oyidingayo kule niche yemakethe.
Izindaba, namuhla, zilethwe ngu Okunhlobonhlobo, yilokho U-Apple wayezoxhumana noDamien Chazelle, umqondisi ophumelelayo we-blockbuster La La Land, phakathi kokunye. Ngokusobala, womabili la maqembu afinyelele esivumelwaneni futhi, ekugcineni, uChazelle uzobhala futhi aqondise uchungechunge lwe-Apple, futhi uzoba ngumkhiqizi ophethe, enze wonke umthwalo.
Iziqu Harvard Ngokuhlonipha, UChazelle waziwa umhlaba wonke ngamafilimu aphumelele kakhulu njenge ILa La Land neWhiplash, bobabili abaphumelele kakhulu kuma-Oscars.
U-Apple manje uphakamisa lo mqondisi owaziwayo uchungechunge olukhulu lokho kungahle kwenzelwe izintshisekelo zenkampani. Isahluko nesahluko, le blockbuster ingasiza inkampani yezobuchwepheshe esekwe eCupertino ukuthi ithole indawo yayo kule makethe enobubi.
Njengoba sesivele siphawule ngale ndlela ngezinye izikhathi, lolu akulona kuphela uchungechunge i-Apple ebheja kulo. I-2018 yethulwa njengonyaka wokuqina kulo mkhakha wenkampani yaseNyakatho Melika.
Okungenani iziqephu eziyi-10 zekholi ebucayi kulindeleke "Ikhaya", uchungechunge lwama-documentary olunikeza ukubukeka ngaphakathi kwezindlu ezinhle kakhulu futhi ezingavamile emhlabeni. Yini enye, uchungechunge olusha luyathuthukiswa olubizwa ngokuthi "Ulele", edlala u-Octavia Spencer. "Izindaba Ezimangalisayo", uchungechunge olusakazwa ngeminyaka yama-80s futhi oluzokhipha iziqephu ezintsha ezikhiqizwe ngu- Ithelevishini ye-Amblin, Inkampani ye Steven Spielberg, uhlamvu lwe-sci-fi nolwesabekayo.
Futhi-ke, cishe izingqinamba ezivulekile eziyishumi nambili i-Apple enazo manje nabakhiqizi, abaqondisi, abalingisi nababhali besikrini. Ngaphandle kokungabaza, i-Apple ingena ngokugcwele emhlabeni wokuqukethwe okubukwayo. Futhi umfana uyaphumelela.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-Apple icela uchungechunge olusha kumqondisi weLa La Land uDamien Chazelle
I-Apple isheshisa imizamo yayo ekushayeleni okuzimele
I-Logic Pro X ibuyekezelwa enguqulweni engu-10.4 ngezindaba ezibalulekile